Saawwan sababa rooba hamaan galaanaan fudhataman ji'ootaan booda lubbuun argaman - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Rhonda Hunter Photography
Goodayyaa suuraa Saawwan badan kun ji'oota sadiin booda qarqara Odola Sedaar jedhamutti argaman
Saawwan sababa rooba hamaa galaanaan odola Karoliinaa Kaabaatii fudhataman erga kiiloomeetira hedduu daakanii qarqara galaanaa ga'anii turtii ji'oota lamaa oliin lubbuun argaman.
Saawwan kun lolaan kan galaanatti dabalaman raafama galaanaa Harrikeen Dooriyaan jedhamu jalqaba baatii Fulbaanaa qaqqabeen ture.
Saawwan kunneen karra loonii kutaa bulchiinsa US Odola Cedaar keessaa kan fudhataman yoo ta'u raafama galaanaa "mini tsunami" sababa Dooriyaaniin uumameen ture kan fudhatame.
Re'oonni mana kitaaba beekamaa gubachuurraa baraaran
Saawwan kun hanga gaafa qarqara Galaanaa Paarkii Biyyaalessaa Keep Lookawut jedhamutti argamanitti akka du'anitti yaadamaa ture.
Yeroo ammaa kana ammoo saawwan kana karoora gara qe'eetti deebisuun taasifamaa jira.
Akka aanga'oonni paarkichaa jedhanitti, saawwan kunneen sadan hanga qarqara galaanaa kana ga'anitti kiiloomeetira 8 ol akka daakan tilmaamu.
Dubbi Himaa paarkichaa kan ta'an BG Horvaat garee oduu Maaklaachiitti akka himanitti erga balaan bubbeefi raafama galaanaa odola sanarratti qaqqabee baatii tokkoon booda hojjetoonni paarkichaa saawa tokko gama qarqara Kaaba paarkichaatti arguu himan.
Saawwan lamaan hafan ammoo torban lamaan darban keessa ture kan argaman.
Obbo Horvaat akka jedhanitti saawwan kunneen gara qilee Garba Atilaantikitti hin fudhatamiin hafuun isaanii carra qabeeyyii isaan taasisa. Yeroo baayyee fardeen bosonaa gara qilee garba kanaatiin fudhatamu.
Saawwan "imala rakkisaa galaanarra daakaa turan kanaan waan hedduu arganii darbaniiru waan ta'eef, seenaa dhugaa nuuf bahan ni qabaatu," jechuun qoosaniiru.
Ji'a Fulbaanaa jalqabaarratti raafamni galaanaafi bubbeen hamaa uumame Hariikeen Dooriyaan jedhamu kan Qarqara Galaana Kaaba Kaalifoorniyaatti uumamee tureefi Bubbee Sadarkaa Tokkoffaadha jedhame lafa bal'aa uwwisee dachaas tuulee darbeera.
Bubbeen hamaan kun ka'umsi isaa Odola Bahamaas yoo ta'u namoota baayyee galaafachuun ture kan bakka sanarraa jalqabe.
Ameerikaatti re'oonni beelofte mana kitaaba gubachuurraa baraaran
Kantiibaan Faransaay dunni saree baay'een dhorkamuu qaba jedhan
Dubartiin mucaa godoo saree keessatti cufte to'atamte